မြန်မာနိုင်ငံသူ၊မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသားတွေအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် ဆုတောင်းစကားနဲ့သစ္စာစကားဆိုလိုက်တဲ့ ခရစ်စတီးနားခီ – Shwe Nay Chi
မြန်မာနိုင်ငံသူ၊မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသားတွေအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် ဆုတောင်းစကားနဲ့သစ္စာစကားဆိုလိုက်တဲ့ ခရစ်စတီးနားခီ
ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေလာကမွာ သက္တမ္းႏု ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ့ ရင္ထဲကို ထိေရာက္စြာ ဆြဲေဆာင္နိုင္ ခဲ့တာကေတာ့ ခီေမာင္ႏွံတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္…. ခရစ္စတီးနားခီ ကေတာ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို မင္းသားတင္ရိုက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္က ဒါရိုက္တာလုပ္ၿပီး ထက္ျမက္တဲ့ အိမ္ရွင္မေကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္. ခရစ္စတီးနားခီနဲ႔ ဇာဏ္ခီတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ကား အနည္းငယ္နဲ႔တင္ မတူကြဲျပားစြာ ထိုးေျမာက္နိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြကို ေစာင့္ေမၽွာ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ သူတို႔ မိသားစုဟာ အာရွနိုင္ငံတခုမွာ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ဇဏ္ခီ ကေတာ့ ထိန္းသိမ္းခံရခ်ိန္ ကာလတုန္းက ေဆးကုသ ခြင့္မရတဲ့သူ႔ရဲ့ နဂိုေရာဂါအခံျဖစ္တဲ့ အရိုးအေၾကာေရာဂါကပိုမိုဆိုးရြားခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ရွိမွာ အခုေရာက္ရွိေနတဲ့နိုင္ငံမွာ ေဆးကုသမႈခံယူေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာ စတင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ D Day ေရာက္လာေတာ့မယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ အႏုပညာရွင္ေတြလည္း ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ ခရစ္စတီးနားခီက ” ညတိုင္းဆိုျဖစ္တဲ့ အမိေျမအတြက္ သစၥာတရားနဲ႔ဆုေတာင္း .. ဓမၼနဲ႔အဓမၼတိုက္ပြဲမွာ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားက ဓမၼဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ ။
ျမန္မာျပည္ႀကီးေသြးေခ်ာင္းမစီးေစဘဲ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားရဲ့ ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ဓမၼဘက္မွာ ရပ္တည္မဲ့ သူေတြေပါမ်ားလာပါေစ ၊ ဒီေျမေပၚမွာ ပြင့္သည့္ပန္း ပန္ဆင္ခြင့္မရွိေတာ့ရင္ေတာင္ ဒီေျမမွာ မိစၧာေတြကင္းၿပီး လွပတဲ့အဖူးအပြင့္ကိုဒီေျမေပၚတြင္ရွိေသာ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အျမန္ဆုံးေအးခ်မ္းစြာ ခံစားခြင့္ရရွိၾကပါေစ ” ဆိုၿပီး သူမရဲ့ Instagram မွာေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် လောကမှာ သက်တမ်းနု ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကို ထိရောက်စွာ ဆွဲဆောင်နိုင် ခဲ့တာကတော့ ခီမောင်နှံတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ခရစ်စတီးနားခီ ကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို မင်းသားတင်ရိုက်ပြီး ကိုယ်တိုင်က ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ အိမ်ရှင်မကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ခရစ်စတီးနားခီနဲ့ ဇာဏ်ခီတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ရုပ်ရှင်ကား အနည်းငယ်နဲ့တင် မတူကွဲပြားစွာ ထိုးမြောက်နိုင်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို စောင့်မျှော်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူတို့ မိသားစုဟာ အာရှနိုင်ငံတခုမှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်ဇဏ်ခီ ကတော့ ထိန်းသိမ်းခံရချိန် ကာလတုန်းက ဆေးကုသ ခွင့်မရတဲ့သူ့ရဲ့ နဂိုရောဂါအခံဖြစ်တဲ့ အရိုးအကြောရောဂါကပိုမိုဆိုးရွားခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိမှာ အခုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ စတင်ကြားခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ D Day ရောက်လာတော့မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အနုပညာရှင်တွေလည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ ခရစ်စတီးနားခီက ” ညတိုင်းဆိုဖြစ်တဲ့ အမိမြေအတွက် သစ္စာတရားနဲ့ဆုတောင်း .. ဓမ္မနဲ့အဓမ္မတိုက်ပွဲမှာ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များက ဓမ္မဘက်တော်သားများကို စောင့်ရှောက်ပါစေ ။
မြန်မာပြည်ကြီးသွေးချောင်းမစီးစေဘဲ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ဓမ္မဘက်မှာ ရပ်တည်မဲ့ သူတွေပေါများလာပါစေ ၊ ဒီမြေပေါ်မှာ ပွင့်သည့်ပန်း ပန်ဆင်ခွင့်မရှိတော့ရင်တောင် ဒီမြေမှာ မိစ္ဆာတွေကင်းပြီး လှပတဲ့အဖူးအပွင့်ကိုဒီမြေပေါ်တွင်ရှိသော ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ အမြန်ဆုံးအေးချမ်းစွာ ခံစားခွင့်ရရှိကြပါစေ ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ Instagram မှာရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးရင်သွေးလေးကို လွယ်ထားရပြီဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့အတူ အားလုံးကိုအသိပေးလိုက်တဲ့ အောန်ဆိုင်း
ပေါင်ပေါ်ကို ခြေထောက်လာတင်တဲ့ရီရီကို အားရပါးရကိုက်မလို့ပြင်လိုက်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်